Baidoa Media Center » Gobolka Hiiraan oo laba loo kala qaybiyay.
Gobolka Hiiraan oo laba loo kala qaybiyay.
August 23, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Ayada oo uu dhawaanahaanba madaxweynaha dowlada Soomaaliya wareegtooyin ku magacaabayay degmooyin cusub ayay dowladda Soomaaliya si rasmi ah ugu dhawaaqay in Gobolka Hiiraan ay u kala qeybisay Labo Gobol, iyadoo qorshaha uu ahaa mid soo jiitamayay, kaasoo ay horay ugu dhawaaqeen Xildhibaano ka soo jeeda Gobolka Hiiraan.
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa lagu shaaciyay in taariikhda marka ay aheyd July ee sanadka la go’aamiyay in wixii ka dambeeya uu Labo Gobol noqonayo Gobolka Hiiraan oo ku yaal Bartamaha Soomaaliya.
“Gobolka Shabellada Sare waxaa loo aqoonsaday Gobol gaar ah oo ka go’ay Gobolkii hore ee Hiiraan”ayaa lagu yiri Wareegtada ka soo baxday Madaxweynaha, iyadoo looga codsaday Hey’adaha dowladda inay dhameystiraan baahida kaga aadan Gobolkan cusub.
Wareegtada Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in magacaabidiisa uu u cuskaday qodobo ka mid ah Axdiga, ayna ku timid soo jeedinta Wasaarada Arrimaha gudaha oo qaabilsan Maamulada Gobolada dalka.
Wasaarada Arrimaha gudaha ayaa sheegtay in Gobolka Hiiraan uu ka mid ahaa 8-dii Gobol ee Soomaaliya lagu aas-aasay, isla markaana markii u horeysay la kala jaro.
Gobolka Shabellada Sare ayaa waxaa xarun u noqon doonta degmada Buulo Burde, iyadoo ay ka koobnaan doonto 9-degmo oo kala ah degmada Xarunta ah ee Buulo Burde, Jalalaqsi, Maxaas, Show, Buur-weyn, Ceel-ciid, Qoryaalle, Halgan, Moqo-kori iyo Buqda.
Sidoo kale Gobolka Hiiraan ayaa xaruntiisa noqon doonta degmada Beledweyn, iyadoo ay degmooyinka Gobolka ay kala yihiin Badweyn, Matabaan, Jawiil, Far-libaax, Ceel Cali, Yucubkam, Beer-gadiid, Macaan Qaalle, Buuco, Abaaleey iyo Feer Feer oo ku taal xuduuda.
Wareegtada ayaa lagu sheegay in dib laga habeyn doono xuduudaha uu yeelan doono Gobolka cusub ee Shabellada Sare oo ka go’ay Gobolka Hiiraan.
Gobolkan cusub ee ku soo biiray Gobolada Soomaaliya ayaa noqonaya gobolkii 19aad ee Soomaaliya.
Maalmihii u dambeeyay ayaa Madaxweyne Shariif waxaa uu aqoonsanayay degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan Gobolada dalka, taasoo ay ka soo hor-jeesteen Golihii Wasiirada uu hogaaminayay C/wali Gaas.